DAAWO SAWIRO:- Ra’iisul wasaare Kheyre iyo Jawaari oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDAAWO SAWIRO:- Ra’iisul wasaare Kheyre iyo Jawaari oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho
Hiiraan Xog, Apr 12, 2018:- Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xalay kulan is cadi ah la qaatay Guddoomiyaha is casilay ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari).
Kulankan isugu jiray Casho, Isku marxabeeyn, Macsalaameyn iyo Duco ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay hoyga Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari), kadib markii halkaasi uu tagay Ra’iisul Wasaare Khayre.
Kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen Wasiiro, Xildhibaano iyo xubno kale ayaa waxaa si hoose isku xog wareystay Khayre iyo Jawaari oo ka wada hadlay xiisadii siyaasadeed ee dalka oo ka dhalatay Mooshinka iyo sidii la isugu niyad furnaan lahaa, maadaama xoogaa hoosaasin ah ay jirtay.
Sida horeyba loola socday Guddoomiye Jawaari ayaa Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ku eedeeyay inuu gadaal ka riixayay Mooshinka ka yaallay isaga, kadib markii sida uu tilmaamay ka shidaal qaadanayay xubno ka tirsanaa Baarlamaanka Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre marna ma uusan ka hadlin Mooshinka Guddoomiye Jawaari oo soo bilowday 14-kii bishii ina dhaaftay ee March, taasi ayaana keentay shakiga iyo in Xukuumadda lagu eedeeyo in ay gadal ka riixeysay Mooshinka, ayna la dhacsaneyd sida ay wax u socdeen.
Gabdho uu isku soo aaday Arooskoodii iyo imtixaankii jaamacadda